Macsyada cusub iyo tixraacyada Apple Watch ayaa ka muuqda keydka Eurasian | Waxaan ka imid mac
La Guddiga Dhaqaalaha Eurasia Had iyo jeer waa meel wanaagsan oo laga raadiyo "tilmaamo" ku saabsan sii -deynta Apple -ka cusub, maxaa yeelay dhammaan aaladaha lagu sii daayay Bariga Yurub, Galbeedka Aasiya, iyo Bartamaha Aasiya waa inay iska diiwaangeliyaan EWC -daas haddii ay adeegsadaan nooc kasta oo teknolojiyad sir ah.
Toddobaadkii horena Apple waxay diiwaan -gelisay tixraacyo cusub oo tixraac ah oo ku saabsan alaab cusub oo ay qorsheyneyso inay suuqyadaas suuq -geyn doonto waqti dhow. Gaar ahaan 6Apple Watch y 2 Mac. Haddii taas aan ku darno 7 tixraac oo cusub oo ah iPhones oo la diiwaangaliyay bishii Juun ee la soo dhaafay, waxaan horey u haysannay dhammaan aaladaha cusub ee Tim Cook iyo asaga ay na tusi doonaan qodobka soo socda….
Apple (sida shirkad kasta oo kale) waxaa waajib ku ah inay daabacdo dhammaan aaladaha ay suuqyada ku darto nooc ka mid ah xog sir ah ee barnaamijyadeeda gudaha ee Guddiga Dhaqaalaha Eurasian. Tani waa wax kuwa Cupertino aysan ka helin xoogaa nimco ah, maadaama ay sidan "uga digayaan" waxa suuqyadooda soo socda la bilaabi doono, iyagoon awoodin inay ka fogaadaan.
Markaa waa khasab in la diiwaangeliyo iPhones -ka cusub, iPad -yada, Apple Watchs iyo Mac -yada jirkaas ka hor inta aan suuqooda lagu iibin waddan kasta oo u hoggaansan EEC.
Toddobaadkii hore, Apple ayaa ka diiwaan -gelisay aalado cusub Guddigan la sheegay. Waa tixraacyada A2473, A2474, A2475, A2476, A2477 iyo A2478. Sharaxaadda, waxay u dhigmaan moodooyinka cusub ee Apple Watch Taxanaha 7. Xogta la bixiyay, waxaa kaliya oo la og yahay inay rakibeen watchOS 8.
Wuxuu kaloo dhaliyay laba lambar oo qayb cusub ah, A2442 iyo A2485 oo ah laba kombiyuutar. Waxay u badan tahay inay yihiin moodooyinka cusub ee 14-inch iyo 16-inch MacBook Pro loo qorsheeyay in la bilaabo ka hor dhammaadka sanadka.
IPhone 13 ayaa mar hore la diiwaangeliyey bishii Juun
Iyo si loo dhammeeyo "isu -dheellitirka" dhammaan aaladaha cusub ee Apple noo soo bandhigi karto qodobka xiga bisha Sebtember, waa inaan ku darno tixraacyada ay shirkaddu hore uga diiwaangelisay EEC bishii hore junio.
Waxay yihiin A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 iyo A2645, oo malaha u dhigma aaladaha cusub iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro iyo iPhone 13 Pro Max. Bishii Juun way isdiiwaangeliyeen, iyagoo ku wargeliyay inay rakibi doonaan macruufka 14. Hadda beertan keydka macluumaadka ayaa wax laga beddelay, macruufka 15.
Marka waxaan horey u haynaa liiska dhammaan wararka Apple bilaha soo socda. Waa la arki doonaa haddii MacBook Pros lagu soo bandhigi doono septiembre oo ku xigta iPhones iyo Apple Watch, ama waa inaan sugnaa dhacdo cusub bisha octubre. Waan arki doonnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Macsyada cusub iyo tixraacyada Apple Watch ayaa ka muuqda keydka Eurasian
Hubi nidaamyada Mac ee internetka ka galaya marinka